ZawGyi to Unicode ​ပြောင်းမရဖြစ်နေလို့။ - MYSTERY ZILLION
ZawGyi to Unicode ​ပြောင်းမရဖြစ်နေလို့။
May 2011 edited May 2011 in Blogspot
ကိုစေတန်ရဲ့ ရေးထားတဲ့ <a href="http://www.saturngod.net/knowledgebase/change-unicode-in-blogspot">Change Unicode in Blogspot</a> ပို့စ်မှာ တင်ထားတဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်တာပါ။
xml file ကို pyconv folder ထဲ ထည့်တာတို့ ၊ bak ကို ဖြုတ်ပြီး exe ​ပြောင်းတာတို့ ၊ pyconv ကို C:\_ အောက်မှာထားတာတို့ အားလုံး လုပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် CMD လုပ်တဲ့အဆင့်မှာ မရတော့တာပါ။ ‘The system cannot execute the specified program.’ ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် အမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပေမယ့် မရပါ။
ကျွန်တော် ဘာလိုအပ်နေလို့ပါလဲ ခင်ဗျာ . . ။
<br><br><hr width="100%" size="2"><center>
I can't see your image. Please , upload on tinypic.com or other host.
သွားတဲ့ Directory လမ်းကြောင်းလွဲနေလို့ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ - အရင်ဆုံး http://goo.gl/dUXLu ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသွားရင် ရလာမယ့် pyconv ဆိုတဲ့ zip file ကို အရင်ဆုံး ဖြည်လိုက်ပါ။ အထဲမှာ dist လို့ ရေးထားတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခု တွေ့လိမ့်မယ်။ အဲ့ထဲက file name တွေကို ကိုစေတန်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်မှာ ပြောထားသလို နာမည်ပြောင်းပါ။ ပြီးသွားရင် blogspot ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချထားတဲ့ xml file ကို အဲ့ဒီ့ dist ဆိုတဲ့ ဖိုဒါအောက်ကို သွင်းပါ။ အောက်မှာ နမူနာ ပြထားပါတယ်။
ပြီးသွားရင် command ကနေ သွားရလွယ်အောင် အဲ့ဒီ့ dist ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို C:\_ အောက်ကို ရွှေ့ပါ။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးသွားရင် cmd ကို run ကနေတဆင့် ခေါ်ပါ။ ပြီးသွားရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း directory change တာနဲ့ convert လုပ်တာကို တစ်ဆင့်ချင်း ဆက်သွားပါ။
နောက်ဆုံးမှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း လိုချင်တဲ့ unicode ပြောင်းပြီးသား xml file ကို ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုမောင်ဇင် ပြောတဲ့အတိုင်း dist folder ကို C: ​အောက်ကို တိုက်ရိုက်ထားပြီးလုပ်တာလည်း မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အရင်လိုပဲ ‘The system cannot execute the specified program.’ လို့ ပေါ်နေပါတယ်။ OS ကွာတာတော့ သတိထားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်သုံးတာက XP 32 bit OS ပါ။ 32 bit / 64 bit နဲ့များ ဆိုင်မလားမသိဘူး ခင်ဗျာ . . .။
try to install <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=a7b7a05e-6de6-4d3a-a423-37bf0912db84">Microsoft Visual C++ 2010</a>
ကိုဝင်းမျိုးထွန်း လောနေလို့ပါ - Command line ကနေ သွားမယ်ဆိုရင် မလောပါနဲ့ - လောမယ်ဆိုရင် အဲ့လိုပဲ Error တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ပြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ပြထားတဲ့ အဆင့်တွေကို တစ်ဆင့်ချင်း အသေးစိတ်ပြန်ဖတ်ပါ - ဘာတွေကို ဘယ်လို ဖြည်ခိုင်းသလဲ ဘယ်ဖိုင်ကို ဘယ်အောက်ကို ရွေ့ခိုင်းသလဲ - ဘယ်လို အစပြုခိုင်းထားသလဲ ပုံတွေကြည့်ပြီး သေချာ စစ်ပါ။ ‘The system cannot execute the specified program.’ လို့ ပေါ်နေတာ ကိုဝင်းမျိုးထွန်းက ကျွန်တော် အဆင့်လိုက် ပြထားသလိုမှ မလုပ်ပဲ - Command တွေကလည်း မှားနေတယ် - ရွှေ့ခိုင်းတဲ့ နေရာကို ရွှေ့ပေမယ့် cd pyconv\_dist ဆိုပြီး စထားတာက မမှန်ဘူး - dist ဆိုတဲ့ ဖိုဒါက pyconv ဆိုတဲ့ zip နဲ့ ချုံ့ထားတဲ့ အောက်မှာရှိပေမယ့် သူ့ကို ဖြည်လိုက်ရင် pyconv ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထပ်ထွက်လာတာမျိုး မဟုတ်ဘူး - ဖိုင်တွေအားလုံး ပြန့်ကျဲပြီး ကျလာတာ - အဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ အထဲမှာ dist ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို C:\_ အောက်ကို ရွှေ့ခိုင်းပြီးမှ command ကနေ သွားခိုင်းတာ - အဲ့တာကို ပြထားတဲ့အတိုင်း မစပဲ cd pyconv\_dist ဆိုတာနဲ့ပဲ စနေရင် directory က zip နဲ့ ချုံ့ထားတဲ့ ဖိုင်အောက်ကိုပဲ ဝင်ပြီး zg2uni.exe ကိုပဲ run နေလိမ့်မယ်။ အဲ့လို လုပ်လို့ မရဘူး။ အဆင့်အားလုံးကို အသေးစိတ် ပြန်ဖတ်ပါ - ပြထားတဲ့ပုံတွေကို သေချာကြည့်ပါ - command line မှာ စာရိုက်ရင် မလောပါနဲ့ - အဲ့တာတွေ ဆင်ခြင်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ကိုစေတန်ရေ Microsoft Visual C++ 2010 ကို Install လုပ်ပြီးလည်းပဲ The system cannot execute the specified program. ပဲ ပေါ်နေတယ်။ :-(
zg2uni.exe ကို ဒီတိုင်း double click နှိပ်ပြီး run လား ဖွင့်ကြည့်ပါ။ dll တခုခုလိုတယ် ထင်တယ်။
ဒါမှမဟုတ် java ရှိတယ်ဆိုရင် http://ttkz.me/blog/2011/01/28/java-based-zawgyi-mm-unicode-converter/ က ကွန်ဗက်တာနဲ့ စမ်းပြောင်းကြည့်ပါ။
GUI နဲ့တင်အဆင်ပြေတဲ့ convertor တွေရှိပါတယ်။ အောက်ကလင့်မှာဖတ်ပြီဒေါင်းပါ။
NLP ရဲ့ Unicode Converter နဲ့ အဆင်ပြေသွားပြီ . . pyconv နဲ့က လုံး၀ အဆင်ပြေဘူးဗျာ . . ကျွန်တော် နောက်ထပ် စက် ၃ , ၄ မှာ ထပ်ပြီး စမ်းလုပ်ကြည့်သေးတယ် လုံး၀မရဘူးဗျို့ . . .exe file ကို run လို့မရတာပါ။ အခုတော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီး NLPကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ပြီးတော့ ကို Morris ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝိုင်းဝန်းကူညီစဉ်းစားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ကိုစေတန်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း . . .